သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိကြိုးမျှင်သည် သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိကြိုးများ အများအပြားဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သံမဏိပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအပလီကေးရှင်း Galvanized steel strand ကို အများအားဖြင့် messenger wire၊ guy wire၊ core wire သို့မဟုတ် strength member စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းကို over over အတွက် earth wire/ground wire အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်သည်။
Bangyi Metal ဝိုင်ယာကြိုး ထုတ်လုပ်မှုအတွက် စက်ပစ္စည်းအသစ်များကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ထွက်ရှိမှုမှာ အလွန်တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း- သံမဏိကြိုး ကြိုးထုတ်လုပ်ရေးသည် အဓိက အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြစ်သည့် Drawing၊ Stranding၊ Closing 1။ Drawing- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်အသုံးပြု၍...
Stainless Steel ဝါယာကြိုး နှင့် လျှောက်လွှာ မိတ်ဆက်
Stainless Steel ဝါယာကြိုးကြိုး၏ အသုံးများသောပစ္စည်းများမှာ 304 နှင့် 316 ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုသည် အသွင်အပြင်နှင့် ခွဲခြားရခက်ပါသည်။၎င်းတို့ကြားရှိ အဓိက ကွာခြားချက်မှာ သတ္တုဒြပ်စင်များ၏ ပါဝင်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ချေးယူခံနိုင်ရည်နှင့် ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီ ကွဲပြားစေသည်။304 နှင့် 316 နှိုင်းယှဉ်...
သံမဏိကြိုးကို သင်သိပါသလား။ သံမဏိကြိုးသည် လိမ်ထားသော သံမဏိကြိုးများစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သံမဏိထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ယခု ဤထုတ်ကုန်ကို အောက်ပါနည်းလမ်းများမှ ကိုးကားကြည့်ကြပါစို့။သံမဏိကြိုးများ...
Hot Sale Jump Rope ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
1. Wire Skipping Rope Specifications: 1. Rope Material: PVC+ Cooper ချထားတဲ့ ဝါယာကြိုး 2. Handle Material: Plastic+Foam+Bearing 3. Rope Size: 0.4cm* 280cm/ 0.45cm* 300cm 4. Handle Size: 3.5 cm* 15 စင်တီမီတာ 5. ကြိုးအရောင်- အနက်ရောင် 6. လက်ကိုင်အရောင်- အနီ၊ အနက်၊ အပြာ၊ အစိမ်း 7. အလေးချိန်- 150g/170g &nb...
Galvanized Steel Wire Rope မိတ်ဆက်
အင်္ဂါရပ်များ- 1. အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ၊ အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်သံမဏိ၊ 45# 60# 65# 70# စသည်ဖြင့်၊ နှင့် မျက်နှာပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် hot-dip galvanizing သို့မဟုတ် electro-galvanized 2. သွပ်ရည်စိမ်ပစ္စည်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ သံချေးဆန့်ကျင်၊ torsion နှင့်ကွေးဖို့ခံနိုင်ရည်, တာရှည်ခံ, မြင့်မားသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခုခံ;3. Tensile...
Bangyi Metal Steel Wire Rope ထုတ်ကုန်စီးရီး
သံမဏိကြိုးကြိုးများထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် Bangyi Metal သည်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသော သွပ်ရည်စိမ်ဝိုင်ယာကြိုးများ၊ သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးများ၊ ကာထားသော ဝါယာကြိုးကြိုးများနှင့် ဝါယာကြိုးကြိုးကိရိယာများ၊ ကိရိယာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်များဖြင့် လက်ကားဈေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။...
ကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုမှုအကွာအဝေးဖောက်ထွင်းမြင်ရသော coated သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး
ပလပ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ထားသော သံမဏိကြိုးကြိုးကို ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ဝါယာကြိုး၊ PVC ဖုံးလွှမ်းထားသော ဝါယာကြိုး၊ PE အုပ်ထားသော ဝါယာကြိုး၊ PVC အုပ်ထားသော ဝါယာကြိုးနှင့် PE အုပ်ထားသော ဝါယာကြိုးဟုလည်း ခေါ်နိုင်သည်။သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံဝါယာကြိုးသည် ခိုင်မြဲစွာ ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် လက္ခဏာများရှိသည်။ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းက တော်တော်များများ...
သင်၏အောက်နှစ်ဆကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးပြီး ပြိုင်ဘက်များကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် ကူညီပေးပါ- အောက်တွင် သုံးဆ။ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်သော ဝက်ဝံဘောလုံးများသည် သီးသန့်အမြန်လှည့်ပတ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက် လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပါသည်။အရှုပ်အထွေးခံနိုင်ရည်ရှိတာကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်...
ကြိုးခုန်ဝယ်, ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး, ropeless skip ကြိုး, ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး, ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။,